Maamulka Khaatumo oo Dawlada Federalka eedeeyey dagaalka Kismaayo (Dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 8, 2013 9:48 b 0
Taleex, June-8-2013, Maxamuud Sh Cumar Xasan ?oo ah agaasimaha arimaha Gudaha eemaamulka Khaatumo ayaa eedayn dusha uga tuuray Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya, isagoo sheegay inay ka danbeeyaan dagaaladii ka dhacay magaalada Ksimaayo.
Wuxuu ?hambalyo u diray maamulka Jubbaland ?oo uu sheegay inay iska difaaceen dad la soo abaabuley oo lagu khalkhal gelin lahaa maamulka Jubbaland sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku geeriyoodey dagaalka Kismaayo, waxaan rumaysanahay dagaalada Kismaayo inay wadaan masuuliyiinta ugu saraysa Dawlada Federalka, hadii ay tahay Madaxweynaha, Ra’isal Wasaaraha, Wasiirka arimaha gudaha iyo Kan Gaashaan dhiga ee Kismaayo ku sugnaa,” ayuu yiri Maxamuud Sh Cumar.
Dhegayso hadalka Maxamuud Sh cumar ee ku aadan dagaalka Kismaayo
Sidoo kale wuxuu sheegay in Wasiirka gaashaan dhigu Kismaayo u joogey sidii uu dagaal uga ridi lahaa, Ujeedadii uu Wasiirka gaashaandhigu u joogey Kismaayo waxay ahayd tii bilaabatay shalay iyo dagaalkii maanta dhacay inkastoo lasoo afharay wixii ay wadeen,’ ayuu hadalkiisa ku daray.
Dhinaca kale wuxuu hambalyo u diray maamulka Jubbaland oo uu sheegay inay adkaysteen amaankoodda,” Umada Jubbaland iyo Masuuliyiinta ay doorteen waxaan ugu hambalyeynaynaa sida fiican ee ay isaga difaaceen dadkii ururiska ahaa ee meesha la isugu keenay waxaana leenahay nabadgelyadiina ilaashadda,” yuu hadalkiisa raaciyey.
Gaba gabadii wuxuu maamulka Jubbaland ugu baaqay inay cafiyaan dadka la majara habaabiyey ee reer Jubbaland,” dadka makasta ah ee la adeegsaday ama dhaqaale lagu duwado ama reer hebel baad tahay lagu duwadee, waxaan odhan lahaa yaan loo raacin waxay geysteen waa umad reer Jubbaland oo la khalday sidii aad u kasban lahaydeen awoodeeda yeesha,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyey Maxamuud Sh Cumar Xasan.
Iskusoo wada duuboo dagaalada ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa dhinacyo badani ku eedaynayaan inay ku lugleedahay Dawlada federalka ah ee Soomaaliya oo wafti wasiiro ahi ka joogeen magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya oo kahadlay dagaalada Kismaayo (Dhegayso)